I-35 I-CUTE LITTLE BOY HAIRCUTS + ETHANDEKAYO YEENWELE ZEENWELE (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 Intombazana encinci enwele iinwele
Zininzi iinwele ezincinane ezinokukhethwa kuzo, kwaye kunokuba nzima ukuba oomama bakhethe ezona ndlela zilungileyo zabantwana babo. Njengabantwana abasakhulayo nabafana abancinci…
Zininzi iinwele ezincinane ezinokukhethwa kuzo, kwaye kunokuba nzima ukuba oomama bakhethe ezona ndlela zilungileyo zabantwana babo. Njengabasana kunye namakhwenkwe amancinci aguqukayo akwishumi elivisayo, kubalulekile ukuba iinwele zabo ezintle zamakhwenkwe zibonise ubuntu babo. Kwaye nokuba inkwenkwe yakho encinci ifuna ukuzama iindlela ezipholileyo kunye nezala maxesha zokucheba iinwele okanye isimbo esiqhelekileyo ngesitayile esithandwayo, kukho inani leenwele ezithandekayo zamakhwenkwe ukuze zifike ngoku.
Nazi ezona zinwele ziphambili zokucheba iinwele ukuzama okwangoku. Ezi zinwele zimfutshane, ziphakathi, kwaye zinde kumakhwenkwe zilungile kwiinwele ezithe nkqo, ezijiyileyo, ezingcakacileyo, ezijiyileyo, okanye ezinyibilikileyo. Ukusuka ekuphelelweni nasekunqamlezweni emacaleni ukuya kwikama ngaphezulu, umtyibilizi ngasemva, ifeksi yomkhombe, icala elisecaleni, ipompadour, kunye neenwele ze-spiky, siqinisekile ukuba aba bantwana banqunyulwa iinwele baya kukhuthaza inkwenkwana yakho encinci. Jonga ezi zinwele zamakhwenkwe zintle ngezimvo kutyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele!
taper ukuchetywa kweenwele indoda emnyama
1Eyona Nwele ilungileyo yeNtsana
1.1Indlela emfutshane ye-Hairstyle
1.2Amacandelo amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu
1.3Amakhwenkwe amancinci aneenwele eziGobileyo
1.4Icandelo Elisecaleni loMnumzana
1.5Ivy League Crew Sika + Ngaphambili
1.6I-Faux Hawk ene-Undercut
1.7Ikama Ngaphezu Fade + Inxalenye nzima
1.8Amakhwenkwe aneenwele ezinde
1.10Utyikitye umva Undercut
1.11Iinwele eziGobileyo ziFade + ziBala ziBala + ngokuPhakama
1.12Umda omde + Amacala amafutshane
1.13Ukuphela kweTaper Taper + Iinwele ezifutshane eziFutshane
1.14Umyalezo weeNwele ezinde
1.15Umbala weenwele zeSpiky Fade
1.16Icala elifutshane lokuTyiwa kweenwele + kwiTaper ePhakamileyo
1.17Quiff + yanamhlanje
1.18I-Mohawk enamacala achetyiweyo
1.19Ngokuqhelekileyo iinwele eziGobileyo
1.20Imveliso emfutshane yeZityalo eziPhezulu + kwiTaper Fade
1.21Umphezulu weShaggy Mop
1.22Iinwele ezijijekileyo eziKhuselweyo + eziMacala aPhelileyo + noMgca oCociweyo
1.23Iinwele eziWavy kwiiNdawo eziPhezulu + eziMfutshane
1.24IPompadour + Ngaphantsi
1.25Izinwele eziMthubiweyo eziMthubiweyo + eziMfutshane eziCwecwe ngeTapered
1.26I-Buzz Sika ukuphela
1.27Mfutshane Utyhile iinwele ngaphambili
1.28Uhlobo olude lweenwele
1.29Crew Sika + iTaper ephantsi
1.30Uhlobo olude lweenwele kunye neeBangs
Eyona Nwele ilungileyo yeNtsana
Abantwana bathatha imfashini kunye nesitayile sabo ngokungathí sina kunakuqala. Kwaye abazali banokunceda ngokukhokela amakhwenkwe abo kwiinwele ezinesitayile kunye neenwele. Makhe sijonge ezona zinwele zithandwa kakhulu kubafana abancinci.
Ngenani elingenakubalwa le-1, 2, 3, 4, 5 okanye i-6 yeminyaka yokucheba amakhwenkwe, le galari yokusika kunye nezitayile zinokukunceda uqhubeke nazo zonke iindlela ezintsha zeenwele zabantwana abancinci.
Indlela emfutshane ye-Hairstyle
Izitayile zeMessy azidingi iinwele ezinde, kwaye le iinwele ezimfutshane ezimangalisayo ngumzekelo ogqibeleleyo wokucheba amakhwenkwe amancinci. Ngapha koko, eli qela lisikiweyo kunye ne-spiky crew lisebenza kuzo zonke iintlobo zeenwele, ngakumbi amakhwenkwe aneenwele ezingqindilili. Kukusika okuqhelekileyo okufana nobude obufanayo kuyo yonke indawo, ngamacala amafutshane kunye neenwele ezinde kancinci ngaphezulu.
Faka isicelo semveliso elungileyo yesitayile kwaye unokwenza isitayile esimdaka, esijongiweyo esithandekayo kwaye esibi ngaxeshanye. Ukuba ukhangela okulula ukukufumana, okulula kwisitayile sokucheba iinwele, olu luvo olujongeka kakhulu.
Amacandelo amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu
Ezona zinwele zithandwa kakhulu zamakhwenkwe zihlala zinde ngaphezulu kwaye zifutshane emacaleni. Kunye fade iinwele emacaleni kunye neenwele ezingqindilili, ubude obuphakathi phezulu ezitshayelwe kwicala elinye, ezi ntlobo zokusika ziyahluka kwaye ziyimfashini.
Ubume bendalo kwimilinganiselo ephezulu emacaleni amafutshane ukwenza imbonakalo yanamhlanje efanelekileyo ngokufanelekileyo kuwo nawuphi na umsitho, nokuba ngumhla wokudlala okanye umcimbi osesikweni. Ngapha koko, amacala amafutshane, iinwele ezinde ezingaphezulu zinokuyilwa njengekama ngaphezulu, i-quiff, i-slick back, iinwele ezi-spiky okanye i-faux hawk.
Sebenzisa i matte pomade , ukhilimu wesitayile okhanyayo, okanye ijeli yokubamba ephakathi yokuxukuxa iinwele zomntwana wakho kunye nokugcina iinwele zikwindawo yonke imini. Njengomnye weyona nkwenkwana ilungileyo yokucheba iinwele ezithe nkqo, awungekhe uhambe gwenxa ngale ndlela isikiweyo kunye nesitayile.
Amakhwenkwe amancinci aneenwele eziGobileyo
Izinwele ezisikiweyo zikhangeleka zinomtsalane kwaye zimnandi kubafana bayo yonke iminyaka, kunye neenwele ezifanelekileyo, ii-curls zinokuhambelana nabuphi na ubuntu benkwenkwe. Ukucheba iinwele zamakhwenkwe amancinci kuhlala kufutshane kwaye kudityaniswe nekhrimu yokuphucula curl yokwenza isitayile ngokulula. Iziqendu ezimfutshane kunye nentwana yemveliso yesitayile zisebenza kunye ukugcina i-curl nganye yahlukile kwaye yahlukile ngaphandle kokongeza uninzi lwevolumu eyongezelelweyo.
Nangona kunjalo, ezinye iinwele ezithandekayo zabantwana abancinci abaneenwele ezigobileyo zibandakanya ii-curls ezikhululekileyo eziwela ebunzi. Izitayile zobude obuphakathi zingenza umsebenzi omangalisayo wokwandisa ivolumu, intshukumo kunye nokuhamba komntwana omhle kakhulu.
Icandelo Elisecaleni loMnumzana
Kuzo zonke iinwele ezisesikweni ezisemgangathweni eziphaya phaya, icandelo leenenekazi lilula eliqhelekileyo elingathathi xesha kwisitayile ekhaya. Le nkwenkwana inqwenelekayo yokucheba iinwele ibandakanya iisentimitha ezimbalwa zobude ngaphezulu zidityaniswe nefutshane, ephezulu.
Ukuyitalela, yonke into oyifunayo kukuqaqamba okuphezulu kwe-pomade okanye ijeli enikezela ukumodareyitha ukubamba ngokuqinileyo. Faka isicelo kwimveliso, uze udibanise iinwele ngaphaya. Icandelo elisecaleni liphela linesitayile esaneleyo emtshatweni, kodwa isefashoni kwaye iyinto engaqhelekanga ngokwaneleyo kumhla kwisikolo sabantwana abasaqalayo.
Ivy League Crew Sika + Ngaphambili
Iinwele ze-Ivy League ziyaziwa ngamakhwenkwe amancinci kunye namadoda ayo yonke iminyaka. Ezi zitayile ze-chic zisachetywa ziinwele ezirhuqwayo, kwaye ngokuziqhelanisa nokuziqhelanisa, le nxalenye inzima kunye ne-spiked ngaphambili ilula kubazali nakubantwana ukwenza isitayile esikolweni.
Mane ubuze i-barber yengane yakho nge-taper ephezulu fade okanye i-undercut emacaleni ngenxalenye echetyiweyo. Ukucheba okufutshane kumagqabi aphezulu malunga nee-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 ubude, zinomphetho omde.
Faka isicelo semveliso yeenwele elungileyo yamakhwenkwe, emva koko ukame iinwele ecaleni kwendalo yomntwana wakho. I-bangs inokutsalwa phezulu okanye itshayelwe ecaleni. Umdibaniso omnandi weqela le-Ivy League elisikiweyo kunye nekama ngaphezulu kokulinganisela okugqibeleleyo phakathi kokusesikweni kunye nokungaqhelekanga, kwaye umphambili wespiked wongeza i-pop enesibindi inkwenkwana yakho eqinisekileyo ukuba iyayixabisa.
I-Faux Hawk ene-Undercut
Kukho iinwele ezincinci ezipholileyo ezisebenza kakuhle kwiinwele ezishinyeneyo okanye ezincinci, kwaye le faux hawk ibhangqwe ne-iconic undercut yenye yazo. I-Faux hawk fade kunye ne-undercut zezinwele bezisoloko zihamba zisomelela kubantwana abancinci, ngakumbi njengokucheba iinwele kumakhwenkwe aneminyaka eyi-1, 2 kunye ne-3 ubudala.
Ngee-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 ubude ngaphezulu, iinwele ezinde zivumela ubume obumdaka obunika i-faux hawk ukuphakama kwayo. I-undercut okanye amacala amafutshane aqhotyoshelweyo agxininisa isitayile kwaye enze ukubonakala kubonakale. Ukuba umfana wakho omncinci une-cowlick awukwazi ukuyenza mbuna, le yindlela entle yokuyifihla!
Ikama Ngaphezu Fade + Inxalenye nzima
Ikama ngaphezulu kokuphela ngumbono wexesha lokucheba iinwele osebenzela iinwele ezithe nkqo, ezingqindilili nezinwele. Le nwele yaseklasini yokucheba iinwele ilungele usuku esikolweni okanye ngeenkonzo zeCawa, kwaye ngenxa yolusu luphela emacaleni nasemva, iya kugcina umfana wakho omncinci kwaye apholile ehlotyeni.
Iinwele ezinde ezingaphezulu zilungiswe ngokugqibeleleyo yinxalenye enzima echetyiweyo. Ngepomade encinci, ijeli, i-wax okanye ukhilimu, ukugcina iinwele ezibrashiweyo endaweni yonke imini yimpepho. Unokwahlula isitayile esicwangcisiweyo ukugqibezela okungaginyisi mathe okanye ugcine isitayile sikhutshiwe kancinci ngaphezulu kwevolumu kunye nokuhamba.
Amakhwenkwe aneenwele ezinde
Iinwele ezinde sisiseko esihle kuninzi lweenwele ezithandekayo nezothusayo kumakhwenkwe. Iinwele ezinde zinokuyilwa ngokwendalo ukuze zithathe umthamo kunye nokuhamba okuphezulu, i-shaggy yompop omdaka, okanye yahlulwe kube kugqityiwe. Nokuba inkwenkwana yakho ithanda ukukhetha ukusika ubude obuphakathi okanye ukunqunyulwa kweenwele ezinde okunqumla ukwahlula kwaye kukhule kudlule emagxeni, abantwana baneendlela ezininzi zokukhetha isitayile.
Ekugqibeleni, iinwele ezinde zamakhwenkwe amancinci zilungile ukuba umntwana wakho uneenwele ezomeleleyo okanye ezomeleleyo. Amagagasi kunye nee curls zenza ubume bendalo kwaye zibonelela ngenkangeleko ekhethekileyo. Ukomeleza abantwana bakho beenwele ezinde, sebenzisa ikhrimu yokuhombisa okanye imveliso.
Amakhwenkwe amancinci aneenwele ezinde anokufuna ukuveza ezabo iindlela zokuba nesibindi kunye nokuqaqadeka besebancinci kakhulu, kwaye i-faux hawk fade inokuba ngumbono olungileyo wokucheba iinwele kubo. Ngolusu oluphakamileyo luphele emacaleni okwahluka okongezelelekileyo kunye notyebile, iinwele ezinde ngaphezulu, oku kuzotywa kweenwele kwabantwana kusemgangathweni kwaye kutsha.
I-pomade ebambelele phezulu igcina iinwele eziphakathi ukuya ezinde zibekwe kwi-spikes ezinombhalo ngelixa i-bald ephezulu ephelelweyo inceda ukudala ukukhohlisa kokuphakama okungaphezulu. Imigca echetyiweyo esecaleni ilungelelanisa isitayile esicocekileyo kakuhle.
Gcina ukhumbule ukuba le yeyona nto ipholileyo iinwele zamakhwenkwe ngeenwele ezingqindilili ukusukela iinwele ezibhityileyo ziya kwenza ukuba kube nzima ukufumana iipiki ezinde.
Oku kuqhekezwa ngasemva kwe-undercut malunga ne-retro kunye nokuthandeka njengoko kufikayo, ngakumbi ngombane ochetyiweyo wombane ecaleni njengokuyila kweenwele. Kubaqalayo, iinwele ezingaphantsi ziyaqhubeka zishushu kwaye zithandwa kwiindawo zokucheba iinwele. Ukusuka kwiintsana ukuya kubantwana abancinci, amakhwenkwe amancinci, abakwishumi elivisayo kunye nabafana abancinci, i-undercut enqanyuliweyo kukusikwa okukhethekileyo okujongeka kulungile nangaluphi na uhlobo lweenwele.
Iinwele ezithe nkqo ngaphezulu zinokuchetywa phakathi kwee-intshi ezi-3 ukuya kwezi-6, zishiya ubude oboneleyo ukuze ziphinde zibuyele emva. Ngethamsanqa, ukufunda indlela yokutyibilika ngasemva kweenwele kulula kakhulu, okwenza ukubuyela umva phantsi kweyona ndlela iphambili yokucheba iinwele zamakhwenkwe.
Kuqala, faka ipomade eyomeleleyo ngokuqaqamba okuthile kwaye uyiqhube kwizinwele zakho. Sebenzisa ikama ukuxubha iinwele zakho umva, isitayile sokubuyela emva kweenwele njengoko ufuna. Oomama kunye namakhwenkwe banokudibanisa iinwele ngokuthe ngqo ngasemva kunye neflethi yokugqibezela iklasikhi, okanye bayihlambe kwaye babuyele ukuze bajonge ngakumbi.
Uyilo lweenwele oluye lwaphela okanye lwangaphantsi luyanyanzeleka kwaye kunokutshintshwa ezinye iisimboli okanye iipateni zejiyometri.
Iinwele eziGobileyo ziFade + ziBala ziBala + ngokuPhakama
Ezinye zezona zinwele zithandwa kakhulu ngabafana beenwele ezomeleleyo zinesibindi, kwaye lo mzekelo awukho njalo. Eyaziwa ngokuba yizinwele ezisikiweyo, ubude ngaphezulu banele ngokwaneleyo ukuvumela ii-ringlets ukuba zigobe ngokwendalo.
Iic curls ezingqindilili zibonelela ngobuhle, ukugqiba kwendalo kunye nemveliso yokukhanya e-anti-frizz enokusetyenziselwa ukulawula nokulawula isitayile. Isitayile silula njengokuhlamba ishampu, ukuvumela iinwele ukuba zome, kwaye usebenze i-curl smoothie emva koko.
Ngapha koko, i-bald fade emacaleni ijolise amehlo kwizinwele ezinde ezisongekileyo ngasentla. Ulondolozo olusezantsi kunye nesitayile, ukuphela kuyakhatshwa ngumgca phezulu ecaleni kwentloko yeenwele, ecoca iitempile kunye nokujikeleza ngenkangeleko entsha.
Umda omde + Amacala amafutshane
Nabantwana abancinci banokuba zi-chic kwaye banemfashini kunye nesidingo sokucheba okwangoku. Ngamacala amafutshane kunye nomphetho omde otshayelwe ukuxhoma ebunzi, le ntombazana intle kodwa inobuhle iyathandwa kule minyaka idlulileyo.
Ilungile kwizinwele ezintle, ezingqindilili, nezithe tye, iinwele ezinde zinokusebenza ziya kuthi zonke iintlobo zeenwele. Ukuba umntwana wakho uneenwele ezinciphileyo, sicebisa isitayile nge-wax ukuze sibonakale sigcwele. Kwangokunjalo, amacala anokuphela emfutshane ukuze agxininise isitayile sokuthambisa ngaphezulu.
Ukuphela kweTaper Taper + Iinwele ezifutshane eziFutshane
Izinwele ezimfutshane ezixineneyo ziqhelekile phakathi kwamakhwenkwe amancinci, kwaye xa zidityaniswe nefreyithi ephantsi, le nwele imfutshane ifanelekile kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni. Ukusikwa okufutshane emacaleni nasemacaleni kuyanceda ukunciphisa ukutyeba kwaye neenwele ezinde ngaphezulu kulula ukuzenza isimbo esimdaka okanye esicocekileyo.
Vasa nje iinwele phambili, uye ecaleni, phezulu okanye umva ngenwele enkulu. Gcina ukhumbula ukuba le nwele ilungele iinwele ezithe tye, kodwa inokusebenzela iinwele ezijijekileyo kancinci ngenkangeleko ethandekayo.
Umyalezo weeNwele ezinde
Ukuba umfana wakho omncinci ulicala le-rambunctious, ukugcina iinwele zakhe zenziwe mbuna kwaye zenziwe isitayile kunokubonakala ngathi akunakwenzeka. Le nwele inde yamakhwenkwe amancinci yamkela ukungcola! Vumela iinwele zomntwana wakho zikhule ixesha elide kwaye vumela ii-lock zakhe ezinobunewunewu zibaleke ngokwendalo ukubonakala kolwandle.
Ezi nwele zamakhwenkwe zincinci ezintle zenzelwe iinwele ezintle, ezingqindilili, ezigobileyo kunye neenwele. Elona candelo lililo kukuba izitayile ezithandekayo azidingi isitayile konke konke. I-shampoo nje kunye nomoya owomileyo ukuze ufumane amaza afanelekileyo. Faka isicelo semveliso yokubamba ukukhanya ngakumbi kunye nolawulo, ngakumbi ukuba umntwana wakho uneenwele ezinqabileyo.
Umbala weenwele zeSpiky Fade
dragon tattoos engalweni
Ukufutshane kweenwele ezinde eziphakathi kwamakhwenkwe zinikezela ngeendlela ezininzi zokukhetha isitayile, kwaye le iinwele ezenziwe ngombala zinika imbonakalo eyonwabisayo kunye nobuhle. Le nwele ye-spiky isikwe ngefade ephezulu kwaye iyatyeba, iinwele ezinde ngaphezulu. Ubuhle benkcenkce yokuphela kweenwele kukuba inokuthi ikhawuleze ijike ibe yi-fohawk, i-quiff, ibrashe umva, okanye isityalo esingaphezulu kwesi-French.
Ukuphepha ukudibanisa iinwele kunye, musa ukusebenzisa ijeli okanye ibrashi. Endaweni yoko, i-matte pomade, i-wax okanye imveliso yodongwe kufuneka isetyenzwe ngezandla kunye neminwe. Ziqhelise ukutsala iinwele zakho ukwenza i-spikes ezinombala ezime nkqo kwaye zide.
Icala elifutshane lokuTyiwa kweenwele + kwiTaper ePhakamileyo
Oomama, ootata kunye nabantwana abangabathandi bezinwele ze-preppy baqinisekile ukuba bayalithanda eli cala litshisayo kwaye libala elifutshane. Iinwele ezinde ezingaphezulu zi brashiwe ngaphambili, zize zitshayelwe ziye kwicala elingaphambili.
Okwangoku, ukuphela okuphezulu emacaleni kugcina isitayile sikhangeleka sipholile, siqhelekile kwaye sihle. Ngenye yeenkwenkwana ezincinci zokucheba iinwele ezithe tye ezongeza ubume, kodwa ikwasikwa kakuhle ngeenwele ezincinci.
Quiff + yanamhlanje
Akukho nto ifana nekhabhathi yanamhlanje yokwenza ingxelo, kwaye le imalunga nokuba intle njengoko ifika. Iinwele zeenwele ezilungisiweyo zilungele isikolo sabantwana abasaqalayo, sabaqalayo, esiphakathi nesiphakamileyo. Ukuba inkwenkwana yakho ikhulile ngeminyaka yakhe, le quiff ijongeka intle kwaye indibaniselwano ye-undercut ilula kakhulu.
Omama baya kudinga ukucela i-barber yabo ukuba ishiye iinwele zinde ngaphezulu, kodwa zimfutshane kakhulu emacaleni. Khetha phakathi kwe ngaphantsi , ukuphela kwendlela , okanye ukuphela kwetaper emacaleni nasemva ukuthelekisa isitayile ngaphezulu. Zininzi iindlela zokwenza ulungelelwaniso olufutshane.
Ngeyona ndlela ilungileyo yokuthayipha isitayile esivulekileyo, fumana iphantsi ungakhanyisi, ubambe ipomade ephezulu. Sebenzisa izandla zakho ukuxubha iinwele zenkwenkwe yakho kwicala nasemva, okanye kwi-diagonally. Olu bhalansi phakathi kwekama ngaphezulu kunye ne-quiff enemicu eshinyeneyo inokufuna umgudu kunye nexesha, kodwa isiphumo kukujongeka okungapheliyo okuhlala yonke imini.
I-Mohawk enamacala achetyiweyo
I-mohawk encinci ilungele amakhwenkwe amancinci aneenwele ezincinci ezingasoloko zisebenzisana nesitayela sendabuko ngakumbi njengenxalenye esecaleni. Nangona ezinye iinwele ze-mohawk zinamacala achetyiweyo, oku akusoloko kuyimfuneko. Ukuphela okuphezulu okanye ukuphela kolusu kunokunciphisa amacala amafutshane ngokwaneleyo ukulungiselela ukujonga.
Ukwenza isitayile senkwenkwana encinci ye-mohawk iinwele, cofa iinwele ezinde phezulu kwindawo kwaye ugcine iinwele emacaleni zifutshane kakhulu nge-buzz okanye nge-shave. Ngapha koko, ukuba iinwele zomntwana wakho zisekwinkqubo yokukhula emacaleni - into exhaphake kwinkwenkwana enonyaka ubudala - le nwele ilungile.
Ngokuqhelekileyo iinwele eziGobileyo
Abantwana abancinci abaneenwele ezintle, ezithandekayo ngokwemvelo ngumona wamadoda nabafazi abakhulileyo kuyo yonke indawo. Endaweni yokuzama ukulwa nee-curls ezineemveliso ezomeleleyo zeenwele okanye ukuzisika ezimfutshane kakhulu, iinwele zanamhlanje ezinamakhwenkwe ezigobileyo zibandakanya ukukhula kweenwele.
Ngokuvumela ii-curls zendalo ukuba zithathe ubomi bazo, abantwana abangamakhwenkwe gqibela ngezitayile ezizodwa. Inwele engentla ilayishiwe kwaye inesitayile esingcolileyo, esenza ukuba iinwele zilula kakhulu ukuba zinxitywe.
Imveliso emfutshane yeZityalo eziPhezulu + kwiTaper Fade
Ukunqunyulwa kwenkwenkwana yanamhlanje konke malunga nokuthungwa, kwaye esi sityalo sineenwele eziphezulu sikhupha iinwele ezisempilweni kwisitayile sokulanda. Isityalo saseFrance siye saba yinto enkulu kubafana, esenza ukuba ukusikwa kuthandwe kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela. Ukugcinwa okwaneleyo kwicawa kodwa ukusika okucocekileyo kunye nokuhamba kakuhle kwesikolo, i-taper yeklasikhi kukuchukumisa okuhle kubazali abafuna ukubonakala kwendoda.
I-taper fade ikwanceda ukudala inkohliso yevolumu eyongezelelweyo ngelixa ugcina ukukhanya kweenwele kwaye kukhululekile. Ngemveliso enesitayile esilinganiselweyo samakhwenkwe, vele uqhubele phambili kwisitayile seenwele ezinqunqiweyo.
Umphezulu weShaggy Mop
Kuzo zonke iinkwenkwana ezinde ezinwele ngoku zihamba ngoku, i-shaggy mop top yeyona nto uyithandayo umzali-ngakumbi kubafana abancinci abakhoyo kumaza wendalo okanye curl ezinweleni zabo.
I-mop top okanye i-shag yeenwele ezinde isebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zeenwele, kwaye okukhona umntwana wakho edlala nzima, kokukhona le ndwele ibonakala ngathi yendalo. Icebo apha kukuvumela iinwele zenze into yazo, ke tsiba iimveliso kwaye vumela izitshixo zakhe ziwele apho zinokwenzeka.
Iinwele ezijijekileyo eziKhuselweyo + eziMacala aPhelileyo + noMgca oCociweyo
Iinwele ezomeleleyo ezinyibilikisiweyo ezinje ngezi zibonelela ngolonwabo oluphakathi phakathi kweenwele ezicocekileyo kunye nophawu lomgangatho wethayile olwenziweyo lathandwa ngasekupheleni kweminyaka yama-70s nakwii-80s zakudala. Ngokutsha nangokutsha, le bhulashi inyanzeliswa ngamacala aphelileyo kunye nenxalenye echetyiweyo. Isebenza kakuhle kwizinwele ezithe tye, ezingqindilili nezirhabaxa.
Ukuphola kweenwele ezincinci zamakhwenkwe ezinje kubonelela ngamathuba angenasiphelo, okubangela ukuba isitayile sekhanda esiya kuthandwa ngumntwana wakho.
Iinwele eziWavy kwiiNdawo eziPhezulu + eziMfutshane
Njengenye yeenwele ezinqamlezileyo kuluhlu lwethu, le fowuni yeenwele iyathandeka. Iinwele ezithandwayo ezithandwayo zithatha ithuba lokuthambeka kweenwele zendalo yomntwana wakho kwaye zikhanye.
Iinwele ezi-Wavy zinenkangeleko yazo eyahlukileyo, kutheni ungakhethi isitayile esipholileyo abanye abantwana abanakho ukukopa. Ngamaleko athile ngaphezulu adityaniswe nokusikwa okufutshane emacaleni, olo tyando luba yinto ekugxilwe kuyo kwisitayile.
Iinwele ngasemva zitshintshelwe ngaphambili, kwaye ii-bangs ezimfutshane ngaphambili zitshayela ngokuthambileyo kwelinye icala ukwenza isitayile esimnandi esinobunkunkqele kwaye sihle kwangaxeshanye.
IPompadour + Ngaphantsi
I-undercut pompadour iya kwenza ukuba inkwenkwana yakho izive njenge-superstar okanye imodeli. Ngelixa oku kulungiswa kweenwele kuza namacala achetyiweyo ukuze kugqitywe, kugqitywe ukucoceka, i-undercut inokuthotywa phantsi ngobude obuncinci emacaleni kunye nevolumu encinci encinci ngaphezulu. Ukuba le ndlela yokucheba iinwele ininzi kakhulu kwingxelo yefashoni yomntwana wakho, cela i-barber yakho ukuba ibe phakathi okanye iphele.
Nangona isebenza ngcono ngeenwele ezomeleleyo, ezinde, ungasebenzisa iimveliso zeenwele ukuthambisa isitampu se-pompadour ngeenwele ezincinci. Qiniseka nje ukuba uyila poof ngaphambili eyenza ipompadour ikhetheke, emva koko ubrashe yonke into.
Kwelinye icala, inwele efanayo inokusetyenziselwa ukunxiba ikama ngaphezulu kokuphela, i-mohawk, okanye i-faux hawk, ke zive ukhululekile ukuzama.
Izinwele eziMthubiweyo eziMthubiweyo + eziMfutshane eziCwecwe ngeTapered
Ukuba ufuna ukuzingela iinwele ezisemncinci okwangoku kodwa okulungele indlela yokuphila komntwana wakho esebenzayo, le iinwele ezimdaka ngombala zinokuba lukhetho olufanelekileyo. Amacala amafutshane afihliweyo agcina izinto zikhanya kunye nolondolozo olusezantsi, kodwa i-messy spiked up top ibonelela ngesimo sengqondo se-chic esixhaphakileyo kwisitayile sanamhlanje sabantwana.
Oomama nootata babantwana abancinci kakhulu bahlala bekhetha iinwele zamakhwenkwe ezifuna isitayile esincinci (ukuba sikhona). Le buzz cut fade yeyona ndlela ilula yokucheba iinwele ukuba ucwangcisa ukusika iinwele zakho ekhaya. Usebenzisa isibini esimiselweyo kunye nenani loku-1, 2 okanye 3 ubukhulu bokugada, sika zonke iinwele ubude obunye. Abazali abanezakhono banokusebenzisa inombolo engu-0 okanye kungabikho mlindi wokucheba ngeenxa zonke kwinwele yokucoceka.
Ekugqibeleni, aba buzz buzz cut is edgy and awesome. Nokuba ufuna iinwele ezemidlalo kwimidlalo yenkwenkwe yakho okanye ufuna nje ukugcina ixesha lokuloba iinwele zakhe esikolweni ntsasa nganye, i-buzz cut fade lolona khetho lubalaseleyo.
Mfutshane Utyhile iinwele ngaphambili
Nantsi intle baby boy iinwele lowo yimpepho eya kwisitayile ekhaya. Ngamacala amade kunye nezinwele ezimfutshane ezinamaphiko ngaphambili, isitayile sifana nefolokhwe yomntwana. Njengeenwele ezithandekayo zenkwenkwana encinci, isebenza ngcono kubantwana abancinci abasadlalayo iinwele zabo ezintle zosana.
Qalisa ngokusika iklasikhi, emva koko brasha iinwele phambili kwaye unyuke ngaphambili. Imveliso encinci enobuhlobo yosana inokunceda ukugcina iinwele endaweni yonke imini. Kubantwana abasakhasayo, uya kufuna ngokupheleleyo ukukhetha iimveliso zeenwele ezinezinto eziphilayo kuphela.
Uhlobo olude lweenwele
Izinwele ezincinci ezinje ngolu jongeko lude olude lujolise ekudaleni inkohliso yeenwele ezijiyileyo, ezigcweleyo. Imigca engqindilili engaphantsi inyusa ubude kunye nevolumu ngaphezulu, isenza neenwele ezigqwesileyo zikhangeleke ngathi ziyatyeba kwaye zisempilweni. Isitayile silula malunga nayo nayiphi na ibrashi okanye ikama, kwaye ubukhulu becala, akukho mveliso iyafuneka ukuze kugqitywe, kugqitywe ngombala.
Crew Sika + iTaper ephantsi
I-classic crew cut is one of the young boy little haircuts short in the recent years, and this version has been styled into an adorable gentyle's hair. Nge-taper fade yokujonga ingqalelo kwi-gelled, iinwele ezahluliweyo, imbonakalo yokugqibela imsulwa kwaye ayinasiphelo.
Ukuba ujonge iinwele ezincinci zokucheba iinwele ezincinci, le yeyona nto unokukhetha kuyo. Nangona kunjalo, sicebisa ukuba singasebenzisi ijeli. Endaweni yoko zama i-wax esemgangathweni okanye ipomade.
Uhlobo olude lweenwele kunye neeBangs
Iinwele zeHipster zamakhwenkwe amancinci zazifudula zimbalwa, kodwa amakhwenkwe esikolo aneenwele ezinde ngoku angakhupha izitayile ezininzi ezithandwayo njengamadoda amadala. Uhlobo olude luyinto emdaka kunye ne-shaggy, kodwa ii-bangs ezibunjiweyo zenza umsebenzi omangalisayo wokuzisa iinwele ezimnandi kunye.
iinwele zamadoda aneenwele ezihlehlayo
ukucheba iinwele zobuso obumbhoxo bendoda
tattoo elungileyo kubafana